Vaovao - Ireo mpiorina amin'ny rafi-pifandraisana herinaratra avy amin'ny masoandro monina
Fitaovana fiarovana DC Surge
DC Isolator Distribution / String Box
Ireo mpiorina amin'ny rafitra herinaratra amin'ny masoandro monina
Ny rafitra herinaratra amin'ny herin'ny masoandro an-trano dia mitaky singa hamokarana herinaratra, hanova herinaratra ho lasa alternating ankehitriny izay azo ampiasain'ny fitaovana ao an-trano, mitahiry herinaratra be loatra ary mitazona fiarovana.
Ny takelaka amin'ny masoandro no singa miavaka indrindra amin'ny rafitra herinaratra amin'ny masoandro mipetraka. Ny takelaka amin'ny masoandro dia apetraka ivelan'ny trano, matetika eo ambonin'ny tafontrano ary mamadika herinaratra ho tara-pahazavana.
Ny vokatra photovoltaic dia ny dingan'ny fanovana ny tara-masoandro ho herinaratra. Ity fizotrany ity dia manome ny takela-bolan'ny masoandro ny anarany hafa, ny takelaka PV.
Ny panneaux solaires dia omena isa naoty amin'ny watts. Ity naoty ity no avo indrindra vokarin'ny tontonana amin'ny toe-javatra mety. Ny famoahana isaky ny tontonana dia eo anelanelan'ny 10 sy 300 watt, miaraka amin'ny 100 watts ho fanaingoana iraisana.
Kitapo mitaingina masoandro
Ny panneaux solaires dia ampiarahina amina arrays ary matetika apetaka amin'ny iray amin'ireo fomba telo: eo amin'ny tafontrano; amin'ny tsato-kazo amin'ny filaharana mijoro malalaka; na mivantana amin'ny tany.
Ny rafitry ny tampon-trano no tena fahita indrindra ary mety takian'ireo ôrdônansy fanaovana zona. Mahafinaritra sy mahomby io fomba fiasa io. Ny lesoka lehibe amin'ny fametrahana ny tafo dia ny fikojakojana. Ho an'ny tafo avo, ny olana amin'ny fanadiovana ny lanezy na ny fanamboarana ireo rafitra. Matetika dia tsy mitaky fikojakojana be loatra ny tontonana.
Ny fipetrahana maimaimpoana, ny fipetrahana amin'ny andry dia azo apetraka amin'ny haavony izay manamora ny fikojakojana. Ny tombony amin'ny fikojakojana mora dia tsy maintsy lanjaina amin'ny habaka fanampiny takiana amin'ny arrays.
Ny rafi-tany dia ambany sy tsotra, saingy tsy azo ampiasaina amin'ny faritra misy fanangonam-panala tsy tapaka. Ny habaka ihany koa dia dinihina amin'ireo havoana marobe ireo.
Na aiza na aiza hametrahanao ny arrays, dia miorina na manara-penitra ireo havoana. Ireo havoana raikitra dia efa natokana ho an'ny haavony sy ny zoro ary tsy mihetsika. Koa satria miova ny zoro'ny masoandro mandritra ny taona, ny haavony sy ny zoro ny fipetrahan'ny tendrombohitra raikitra dia marimaritra iraisana izay mivarotra zoro optimum ho an'ny fametrahana lafo kokoa sy tsy dia sarotra.
Ny filaharana fanarahana dia mihetsika miaraka amin'ny masoandro. Ny laharan'ny fanarahan-dia dia mianatsinanana miankandrefana miaraka amin'ny masoandro ary manamboatra ny zorony hitazomana ny optimum rehefa mihetsika ny masoandro.
Array DC Tapaho
Ny fanapahana Array DC dia ampiasaina hanalana ny tara-masoandro avy any an-trano mba hikolokoloana. Antsoina hoe DC disconnect izy io satria ny filaharan'ny masoandro dia mamokatra herinaratra DC (mivantana ankehitriny).
Ny takelaka sy bateria Solar dia mamokatra herin'ny DC (mivantana ankehitriny). Ny fitaovana mahazatra ao an-trano dia mampiasa AC (arus ankehitriny). Ny inverter dia mamadika ny herin'ny DC novokarin'ny panneaux solaires sy ny batterie ho an'ny herin'ny AC takian'ny fitaovana.
Ny rafitra herinaratra avy amin'ny masoandro dia mamokatra herinaratra mandritra ny andro, rehefa miposaka ny masoandro. Ny tranonao dia mitaky herinaratra amin'ny alina sy amin'ny andro rahona - rehefa tsy miposaka ny masoandro. Mba hanefana ity tsy fitoviana ity dia azo ampiana batterie ao amin'ilay rafitra.
Meteran'ny herinaratra, Metera azo ampiasaina, Metatra Kilowatt
Ho an'ireo rafitra mitazona fifamatorana amin'ny tambajotra ilaina, ny refin'ny herinaratra dia mandrefy ny habetsaky ny herinaratra ampiasaina avy amin'ny takelaka. Ao amin'ny rafitra noforonina hivarotra herinaratra, ny refin'ny herinaratra dia mandrefy ny habetsaky ny herin'ny herin'ny masoandro alefa hatrany koa.
Ho an'ireo rafitra izay tsy mifamatotra amin'ny tambajotra azo ampiasaina dia ampiasaina ny mpamorona backup mba hanomezana herinaratra mandritra ny vanim-potoana fivoahan'ny rafitra ambany noho ny toetr'andro ratsy na ny filan'ny isan-tokantrano. Ny tompon-trano miahiahy amin'ny fiantraikan'ny tontolo iainana amin'ny tontolo iainana dia afaka mametraka mpamokatra herinaratra mandeha amin'ny solika hafa toy ny biodiesel fa tsy lasantsy.
Ny takelaka fanapahana no mampifandray ireo loharano herinaratra amin'ireo faribolana elektrika ao an-tranonao. Ny fizaran-tany dia làlana mitohy amin'ny tariby mifandraika izay miaraka miaraka amin'ireo fivoahana sy jiro ao amin'ny rafitra herinaratra.
Isaky ny fizaran-tany dia misy mpandika faritra. Ireo mpamaky faribolana dia manakana ireo fitaovana amin'ny faritra tsy hahazo herinaratra loatra ary hiteraka loza ateraky ny afo. Rehefa mitaky herinaratra be loatra ny fitaovana mandeha amin'ny faritra iray dia ho faty na hivezivezy ny mpanapaka faritra, manelingelina ny fizotry ny herinaratra.
Ny mpanara-maso ny fiampangana - fantatra koa amin'ny hoe regulator de charge - dia mitazona ny herinaratra fihenan-tsasatra mety ho an'ny baterin'ny rafitra.
Ny bateria dia azo vidiana lafo, raha omena herinaratra mitohy. Ny mpanara-maso dia miandraikitra ny herinaratra, misoroka ny famoahana be loatra ary mamela ny famerana raha ilaina izany. Tsy ny rafitra rehetra no manana batterie: raha mila fanazavana bebe kokoa momba ny karazana rafitra dia jereo ny: 3 Karazana rafi-kery solon'ny masoandro monina.
Fotoana fandefasana: Aug-24-2020
No.75 Xinguang Avenue, faritra indostrialy Xinguang, Liushi, Tanàna Yueqing, Faritanin'i Zhejiang, PRChina.
MOMBA ANTSIKA ASAM-PIVAROTANA Mandraisa karama aminay
© Copyright - 2019-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Tohana ara-teknika: